Aorian'izay, ny fanafarana vy sy fanondranana vy any amin'ny fireneko dia mety haneho lamina “avo roa heny” - China Foshan Hermes Steel
Aorian'izay, ny fanafarana vy sy fanondranana vy any amin'ny fireneko dia mety haneho lamina “avo roa heny”
Araka ny antontan'isa farany avy amin'ny General Administration of Customs, ny fireneko dia nanondrana vy 7,542 tapitrisa taonina tamin'ny volana martsa, fitomboana 16,5% isan-taona; ary nanafatra vy 1,2222 tapitrisa taonina, fitomboana 16,3% isan-taona. Tao anatin'ny telo volana voalohany, nanondrana vokatra vy 17,682 tapitrisa taonina ny fireneko, fitomboana 23,8% isan-taona; fitomboan'ny vokatra vy dia 3.718 tapitrisa taonina, fitomboana 17.0% isan-taona.
Ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra dia ny fanondranan'ny vy ny fireneko tamin'ny volana martsa nitombo 2.658 tapitrisa taonina raha oharina tamin'ny febroary, fitomboana 54,4%, nametraka avo lenta isam-bolana ny fanondranana vy hatramin'ny aprily 2017.
Raha ny hevitry ny mpanoratra, miaraka amin'ny fanarenana ireo fanondranana vy any amin'ny fireneko, ny fanafarana vy sy fanondranana vy any amin'ny fireneko dia mety haneho lamina “avo roa heny” amin'ny vanim-potoana manaraka. Ny "voalohany avo indrindra" dia hita taratra amin'ny volavola: ny totalin'ny fanondranana vy sy ny fanondranana dia hijanona amin'ny ambaratonga avo; ny "avo indrindra" dia hita taratra amin'ny tahan'ny fitomboana, ary ny fanafarana vy sy ny fanondranana dia hitazona taham-pitomboana avo lenta mandritra ny taona. Ny antony lehibe dia ireto manaraka ireto:
Voalohany, eo ambanin'ny fiakaran'ny tampon'ny karbaona sy ny tsy fitongilanana amin'ny karbaona, ny faritra mpamokatra vy lehibe ao amin'ny fireneko dia nanangana politikam-pahefana miaro amin'ny tontolo iainana avo lenta, ka nahatonga ny fihenan'ny fizotran'ny vokatra vy voalohany toy ny bileta sy vy vy. Tao anatin'izany toe-javatra izany dia niditra an-tsena ny vokatra vy any ivelany. Izany dia hita amin'ny fanondranana bileta vy Vietnamianina vao haingana tany Chine.
Ny olona tompon'andraikitra misahana ny fikambanan'ny indostria dia nanambara teo aloha fa mamporisika ny fampitomboana ny fanafarana vokatra voalohany toy ny vy vy ary manome ny anjara asan'ny tsena fanafarana amin'ny fiantohana ny famatsiana ny tsena anatiny. Mino ny mpanoratra fa ny fampidirana ireo vokatra vita amin'ny vy voalohany dia ho ara-dalàna amin'ny ho avy, izay hampiroborobo kokoa ny fitomboan'ny fanafarana vy eto amin'ny fireneko.
Faharoa, ny fahasamihafana eo amin'ny tsena eto an-toerana sy any ivelany dia manome fepetra tsara ho an'ny fanondranana vy eto an-toerana. Miaraka amin'ny famerenana ny fangatahana any amin'ny tsena ampitan-dranomasina, nisondrotra be ny vidin'ny vy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ary vao mainka nitombo ny elanelam-bidin'ireo vokatra vy eto an-toerana. Raiso ohatra ny HRC. Amin'izao fotoana izao, ny vidin'ny HRC mahazatra eo amin'ny tsenan'i Etazonia dia nahatratra $ 1,460 / taonina, mitovy amin'ny RMB 9,530 / taonina, raha ny vidin'ny HRC ao an-trano dia 5 500 Yuan / taonina fotsiny. Noho io antony io dia mahazo tombony bebe kokoa ny fanondranana vy. Naminany ny mpanoratra fa hanafaingana ny fandaharam-potoana ny kaomandy fanondranana ireo orinasa vy any aoriana, ary hijanona ho avo ao anatin'ny fotoana fohy ny habetsahan'ny vokatra fanondranana.
Amin'izao fotoana izao, ny antony lehibe tsy azo antoka dia ny fanitsiana ny politikam-panjakan'ny hetra fanondranana vy. Rehefa io fampiharana io no ampiharina dia tsy tapa-kevitra izao. Na izany aza, mino ny mpanoratra fa tsy azo inoana fa ny "volan'ny haba fanondranana vy" dia "hodiovina" mivantana, fa ny "fampandehanana tsara" manomboka ny 13% ka hatramin'ny 10% eo ho eo dia mety tranga mety hitranga.
Amin'ny ho avy, ny firafitry ny vokatra fanondranana vy eto an-toerana dia hifindra manakaiky ireo vokatra be sandany, ary ny fanondranana vy dia hiditra amin'ny ambaratonga "avo telo" misy kalitao ambony, avo lenta ary avo lenta »hanakanana ny fiatraikany ny fanitsiana ny tahan'ny hetra.
Manoloana izany dia hitombo hatrany ny volan'ny fanondranana vokatra vy manokana. Ny data dia mampiseho fa tamin'ny vy vy 53,68 tapitrisa taonina natondraky ny fireneko tamin'ny taona 2020, ny bar sy tariby dia 12,9%, ny zoro sy ny vy fizarana dia 4,9%, ny takelaka dia 61,9%, ny fantsona dia 13,4%, ary ny vy hafa karazany nitahiry ny Ny tahan'ny nahatratra 6,9%. Amin'izany, 32,4% an'ny vy manokana. Naminany ny mpanoratra fa amin'ny ho avy, eo ambany fitarihan'ny fanitsiana ny politika momba ny fandoavan-ketra fanondranana dia hitombo hatrany ny tahan'ny fanondranana vokatra vy manokana eto an-toerana.
Mifanaraka amin'izany, ny fanafarana vy dia hampiseho ny lamin'ny "fitomboana haingana amin'ny taham-pahavitan'ny vokatra voalohany ary ny fiakaran'ny vidin'ny vy avo lenta". Rehefa mitombo hatrany ny fikarohana anatiny sy ny fampandrosoana ny vy avo lenta, dia mety hihena ny tahan'ny vy avo lenta. Ny orinasan-trano vy eto an-toerana dia tokony hiomana tanteraka amin'izany, hanatsara ny firafitry ny vokatra ara-potoana, ary hikatsaka fahafaha-manao fampandrosoana amin'ny lamin'ny fanovana sy ny fanondranana entana.